Wasiirka isdhexgalka oo la kulmay Soomaalida Uddevalla | Somaliska
Maalintii Jimcaha oo ay taariikhdu aheyd 15-04-2011 Waxaa magaalada Uddevalla ee gobalka Västra Götaland booqasho ku tagey Wasiirka Isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag. Wasiirka waxaa uu ku qaabilay Hotelka Riverside Gudoomiyaha Jaaliyada Soomalida ee Bohuslän Abshir Cabdi Macow iyo Xoghaynta xuquuqda Dumarka Iimaan Hassan. Wasiirka Isdhexgalka ayaa magaalada u yimid sidii loo hormarin lahaa isdhexgalka bulshada iyo sinaanta isagoo ka hadlay sidii looga hortagi lahaa midabtakoorka. Gudooomiyaha Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän Abshir Macow ayaa kala hadlay Wasiirka Isdhexgalka sidii ay caawinaad u Heli lahaayeen soomaalida ku nool Wadankan Sweden,.Haddii ay noqon laheyd Waxbarasho Aqooneed iyo Xirfad ay ku shaqeystaan Mustaqbalka, oo aan mar waliba loo dirin Praktik keliya iyo wixii la mid ah, iyo sidii Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän caawinaad Buuxda ooga heli laheyd degmada Uddevalla, Shirkadaha kala duwan iyo wasaarada uu madaxda ka yahay wasiirka. Sidoo kale waxay ka wada Hadleen reeraha Soomaalida ee kala maqan ama caruurtooda ku xaniban yihiin wadamo kale, oo ay waalidiinta halkan jooga Noloshooda qabyo tahay, niyadooduna liidato, oo markaas ay adag tahay in ay ku Fakaraan Isdhexgalka bulshada ama Waxbarasho. Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ayaa u gudbiyay wasiirka warqad ku socota Raysal wasaaraha Sweden oo mowduuceeda yahay sidii taageero loo siin lahaa Bulshada Soomaaliyeed ee Sweden. Abshir Macoow ayaa ah nin siyaasi ah oo ku firfircoon magaalada Uddevalla isagoo ugu baaqaya Soomaalida ku nool Sweden in ay dadaalkooda sii laban laabaan oo ay badiyaan isdhexgalka bulshada iyo in aan u hogaansano sharciga wadanka aan ku noolnahay. Maamulka Jaaliyada Bohuslän ayaa ugu baaqaya jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka dhisan Sweden in ay xiriirka badiyaan si ay u kala faaidestaan wixii talo iyo aqoon ah. Soomaalida ku dhaqan Sweden ayaa meelkasta oo ay joogaan waxay leeyihiin jaaliyado, kuwaasoo aan horey ugu sifeeyay kuwo ay ku mideysan yihiin iyo kuwo ay ku kala qeybsanyihiin. Hadaba Jaaliyad kasta waxaa lagu amaani doonaa waxqabadkooda iyo sida ay ugu dadaalaan mideynta bulshada. Wasiirka isdhexgalka ayaa horey ula soo kulmay Jaaliyada Somaliland ee ka dhisan magaalada Malmö kuwaasoo ku guuleystay bilada isdhexgalka ee magaaladaasi.
Maalintii Jimcaha oo ay taariikhdu aheyd 15-04-2011 Waxaa magaalada Uddevalla ee gobalka Västra Götaland booqasho ku tagey Wasiirka Isdhexgalka Sweden Erik Ullenhag. Wasiirka waxaa uu ku qaabilay Hotelka Riverside Gudoomiyaha Jaaliyada Soomalida ee Bohuslän Abshir Cabdi Macow iyo Xoghaynta xuquuqda Dumarka Iimaan Hassan.
Wasiirka Isdhexgalka ayaa magaalada u yimid sidii loo hormarin lahaa isdhexgalka bulshada iyo sinaanta isagoo ka hadlay sidii looga hortagi lahaa midabtakoorka.
Gudooomiyaha Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän Abshir Macow ayaa kala hadlay Wasiirka Isdhexgalka sidii ay caawinaad u Heli lahaayeen soomaalida ku nool Wadankan Sweden,.Haddii ay noqon laheyd Waxbarasho Aqooneed iyo Xirfad ay ku shaqeystaan Mustaqbalka, oo aan mar waliba loo dirin Praktik keliya iyo wixii la mid ah, iyo sidii Jaaliyada Soomaalida ee Bohuslän caawinaad Buuxda ooga heli laheyd degmada Uddevalla, Shirkadaha kala duwan iyo wasaarada uu madaxda ka yahay wasiirka.
Sidoo kale waxay ka wada Hadleen reeraha Soomaalida ee kala maqan ama caruurtooda ku xaniban yihiin wadamo kale, oo ay waalidiinta halkan jooga Noloshooda qabyo tahay, niyadooduna liidato, oo markaas ay adag tahay in ay ku Fakaraan Isdhexgalka bulshada ama Waxbarasho.
Gudoomiyaha jaaliyada Soomaalida ayaa u gudbiyay wasiirka warqad ku socota Raysal wasaaraha Sweden oo mowduuceeda yahay sidii taageero loo siin lahaa Bulshada Soomaaliyeed ee Sweden.
Abshir Macoow ayaa ah nin siyaasi ah oo ku firfircoon magaalada Uddevalla isagoo ugu baaqaya Soomaalida ku nool Sweden in ay dadaalkooda sii laban laabaan oo ay badiyaan isdhexgalka bulshada iyo in aan u hogaansano sharciga wadanka aan ku noolnahay. Maamulka Jaaliyada Bohuslän ayaa ugu baaqaya jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka dhisan Sweden in ay xiriirka badiyaan si ay u kala faaidestaan wixii talo iyo aqoon ah.
Soomaalida ku dhaqan Sweden ayaa meelkasta oo ay joogaan waxay leeyihiin jaaliyado, kuwaasoo aan horey ugu sifeeyay kuwo ay ku mideysan yihiin iyo kuwo ay ku kala qeybsanyihiin. Hadaba Jaaliyad kasta waxaa lagu amaani doonaa waxqabadkooda iyo sida ay ugu dadaalaan mideynta bulshada.
Wasiirka isdhexgalka ayaa horey ula soo kulmay Jaaliyada Somaliland ee ka dhisan magaalada Malmö kuwaasoo ku guuleystay bilada isdhexgalka ee magaaladaasi.
Run ahantii waa wax aad loogu Farxo Haddii aynu heli laheyn Soomaali isku duuban oo Danahooda ka wada shaqeyneysa, Gudoomiye Abshir Waxaan dhihi Lahaa Mahadsanid waa Nin lagu daydo sida uu u fakaraayo, Badanaa Jaaliyadaha Soomaalida wax ay Qabtaan ma jirto, Waxyaabo aan loo Baahneyn iyo Dib u dhac iyo Dagaal,Qabiil iyo Qaylo aan micno ku fadhin.
Marka Soomaaliyeey Hurdada ka kaca Dunidana La qabsada, Mise Jaahilnimada ku sii jira, War Dunida waa ay naga tagtay, Soomaalidana dib bay u guratay.
Add iyo Add ayaan oogu faraxsanahey somalida joogta Uddevalla sida aad isugu dayeesaan in aad wax qabsataan oo aad tihii dad isku duuban hadaan somali nahay dad badan oo isku duuban aad bay u yaryihii gudoomiye Abshir iyo dadka kula shaqeeya somalida jecel wanaaga aad ayey oogu faraxsan yihii Mahadsanidiin.
ASC AAD AYAAN UGUFARAXSANAHAY JALIYADA SOOMALIYEED EE KUDHAQAN UDDEFALLA WAA WAX LAGUFARXO SOOMAALI ISKUDOOBAN WAXAAN KALOO UMAHAD CELINAYAA ABSHIR IYO IMAAN JAKAW WAXAAN LEEYAHAY KASII WADA HALKAA ILAHAYNA SOMALIDA HAYSO SOOJEEDIYO MEELKASTA OOY JOOGAAN ILAHAYNA HASO KEENO WAALIDKA IYO CARUURTA KALAMAQAN